Abacre Ego nkịtị Register - isi Page
Anyị ga-onwe ụbụrụ gị site na-eme ka anyị smart software
Abacre Ihe ndekọ ego
Free Akwụkwọ Akụkọ
Subsribe ka RSS faili ntanetịime
Mgbakwunye na anyị na-enweta 5% si reselling site na-eme ka a dị mfe njikọ anyị na saịtị ahụ!
Iru akara na nke a ọzọ ọgbọ ndekọ ego software!
Download zuru-apụta 30-ụbọchị ikpe mbipute ( 6,15 MB)
Lee ndepụta nke isi atụmatụ
Lite v Standard v ọrụ ikikere Njirimara matriks
Top 10 ihe ịzụta Abacre Ihe ndekọ ego
Na-arụ ọrụ zuru okè na Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / Windows 7/8.
Abacre Ego nkịtị Register bụ ọgbọ ọhụrụ nke ndekọ ego software maka Windows. Ọ bụ ihe ọnụ ngwọta n'ihi ọtụtụ ụdị ndekọ ego arụmọrụ. Ojii interface na-ọma kachasị n'ihi na elu ọsọ ọsọ ọsọ nke a ahịa si ka na mgbochi nke nkịtị ndudue. Ọ mere maka iji na otutu kọmputa, na e nwere pụrụ ịdabere na ala ikike na ọkwa.
Ọ na-arụ ọrụ niile eji ngwaike: aka ákwà, naa na-ebi akwụkwọ, ahịrị ngosipụta (osisi), ego úkwù na barcode agụ (mmanya koodu scanners). The layouts nke ahịa ụgwọ nwere ike ahaziri, na ihe omume nwere ike melite ọ bụla ego, ụtụ isi, na ọtụtụ formats. Ịkwụ ụgwọ ga-anabata ego, kaadị akwụmụgwọ, ma ọ bụ akwụkwọ ndenye ego.
N'ihi na ndị njikwa, e nwere bụ ọgaranya set nke kọrọ na-egosi na a zuru foto nke ego arụmọrụ: ahịa site nyere oge, awa nke elu ibu, z-si, ihe kasị ike ọrụ, ịkwụ ụgwọ ụzọ, na akpaka ụtụ isi calculations.
Site standardizing dum ahịa, usoro software na-eme ka mma iji gị ọrụ 'oge na ume n'ịgbanwe mee gị ntụgharị na uru n'akụkụ peeji.
Ọ dị mfe iji wụnye na mfe iji. Nnọọ oké ọnụ ikikere enye ohere a software ọ bụla ga-eji na gburugburu ebe obibi site na obere otu-kọmputa mkpọsa ụlọ ahịa na-ere ahịa nnukwu ígwè na otutu ndenye ọpụpụ lanes.
English , Afrikaans , Albania , Arabic , Armenian , Azerbaijani , Basque , Belarusian , Bengali , Bosnian , Bulgarian , Catalan , Cebuano , Chinese (Simplified) , Chinese (omenala) , Croatian , Czech , Danish , Dutch , Esperanto , Estonian , Filipino , Finnish , French , Galician , Georgian , German , Greek , Gujarati , Haitian Creole , Hausa , Hibru , Hindi , Hmong , Hungary , Icelandic , Igbo , Indonesian , Irish , Italian , Japanese , Javanese , Kannada , Khmer , Korean , Lao , Latvian , Lithuanian , Macedonian , Malay , Maltese , Maori , Marathi , Mongolian , Nepali , Norwegian , Persian , Polish , Portuguese , Punjabi , Romanian , Russian , Serbian , Slovak , Slovenian , Somali , Spanish , Swahili , Swedish , Tamil , Telugu , Thai , Turkish , Ukraine , Urdu , Vietnamese , Welsh , Yiddish , Yoruba , Zulu
Olee ndị na-asị:
"N'ihi na afọ anyị na-eji otu MS DOS ụlọ oriri na ọṅụṅụ naa usoro ruo mgbe anyị mesịrị chọta ezi Windows dabeere na dochie anya: Abacre Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Point nke ire. M tụnyere ya na ọtụtụ ndị ọzọ na programmụ na m kwụsịrị na artpos, n'ihi na ọ ọma-mere na ọma-ọnụ ahịa. N'ihi ya, anyị zụtara ihuenyo mmetụ Monitors, ọhụrụ kọmputa na artpos. The mgbanwe site ochie MS DOS usoro ndị ọhụrụ Windows dabeere na usoro bụ dị ịrịba ama: na artpos anyị na-eji ihe oyiyi n'ihi na menu ihe maka ngwa ngwa igodo, akụkọ ndị na-eju anya na ihe omume ahụ na ya onwe ya bụ nnọọ configurable na kemfe. Ebe ọ bụ na na oge m na a eziokwu akwado artpos na m nwere ike ikwu na ọ na-azụmahịa m enyi. "
NY, USA GỤKWUO
Home | Ngwaahịa | Downloads | Order | Nkwado
Copyright © 2014 Abacre Limited . Ikike niile echekwabara.